I-Rybna Studio ka-Jan noSarah - I-Airbnb
I-Rybna Studio ka-Jan noSarah
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Jan & Sarah
Gxila emashidini acwebile, amhlophe ukuze ulale ngokuthula ebusuku endaweni yokuhlala ekhanyiswe yilanga enokuhlobisa okuthambile, okumaphakathi, indawo ephansi kanye nephansi elifudumele lezinkuni bese uthatha uhambo uye ezindaweni zokudlela eziseduze. Sinikeza ukungena okungu-24/7 kanye nesitoreji semithwalo mahhala!
“Singabantu ukwesekwa kwakho ngesikhathi adventure yakho ePrague. Ngathi konke kuyenzeka!”
– Jan & Sarah, umbungazi wakho
Imipheme eyenza ikamelo libe mnyama, I-Smart TV, Pakisha bese ugcwala is'ganga/umbhede wosana, Umbhede omkhulu
4.92 out of 5 stars from 420 reviews
4.92 (izibuyekezo ezingu-420)
Indawo yaseJosefov inama-bistros asemfashinini kanye nezindawo zokudlela ezimnandi yonke indawo. Izindawo ezifana neCharles Bridge, Prague Castle, Old Town Square kanye neVyšehrad zonke zingaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo, azikho izithuthi zomphakathi ezidingekayo.
Ibanga ukusuka e- Václav Havel Airport Prague
Ibungazwe ngu-Jan & Sarah
UJan & Sarah Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Prague namaphethelo